Posted: Ebla/April 27, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (52)
Ergan kana jedhe booda kufiitii/kisaaraa siyaasaa irraan kan ka’e dhidhiitatu guddina dubbataan Dhaabichaa (ODF) gaaffii deebisaa radio Australia tokkoof afaan Amaaraan kenne irratti akka waan biyyatiin ykn Empire suni Democrasi taatetti dhiheessuu isaati. Kuniis waan hedduu nama gaddisiisuu dha. Erga Empire suni Demokraasi taate isin maal democraateesitu kan jedhuus gaaffii dha. Dhugumatti gaaffii fi Deebisaalee Obbo Leencoo Lataa fi gaaffii deebisaa Obbo leencooo Baatii waliin tasifamaa jiru yeroon dhageefadhu hammam takka akka garaagarummaan jiruu fi kisaaraa tahe kanaas hammam kisaaraa isaani haguugani bira taruuf tattaafatamaa akka jiramu arguun hedduu salphaadha.
Ummanni Oromoo gabrummaan nu gahe jedhee karaa adda addaan diinaan yeroo falmaa jiru keessatti, biyyonni angaawoo tahan fi dhaaboonni mirga dhala namaaf falman illeen akka mootummaan suni democraasi waan jedhamu hin beeynee akkasuma farra ummataa akka tahe ifaan ifatti dubbachaa fi gargaarsa irraa dhaabaa jiran kana keessati isaan biyyiti democracy dha jachuun qilleensa irra akka jiran nama garsiisa. Kana malees yeroo Qeerroon qalamaa fi daftaraan golee Oromiyaa hunda keessatti falmaa finiinsaa, ajjeefamaa, hidhamaa fi biyyaa arhamaa jiran kana keessatti Ethiopian Democracy dha jachuun akka jarri kun haala qabatamaa biyyatii keessa jiru irraa fagoo tahan garsiisa.
Jalqabuma irratti Obbo Jamaal (Fatansaa) jilli ADO biyya galee deebi’uun seenaa keessatti isa duraa tahuu qofa soo hin tahiin ittin boona jedhee. Gama kiyyaan Gantooninnii fi ayyaan laallatuun biyya galuun amma waan hin jalqabaminiif akka sana dura hin tahinitti dhiheessuun dogoogra seenaa tahuu jala harriiquu barbaada, Kanneen harka kennanii fi yaaduma fakkaataa qaban kan mana hidhatti guuramanii fi ajeefaman akaasumas akkuma jila inni ittiin dhaadatu kanatti deported ykn arihaman hedduu tahuu isaa wallaaluun nama Obbo jemaal beekuuf hubatamaa dha. Kan biraa hafee seenaa duuba deebinee yoo ilaalle Obbo Leencoo Lataanu tanaan dura biyya dhaqee arihamuun isaa tuquun numa gaha.
Kutaa kana jalatti itti fufuu – Oromoonni ala jiran Oromummaahu namoota hin beeyne isa jedhuus dhagayee hedduun gadde. Dhugumatti ati erga London dhufteehu takkaa Oromotti gadi baatee beeytaa? Ati Oromummaa keetituu nama amanu yoo taate qoonni ati kennite dhugiitii fi tanboo xuuxuu malee maali? Dagalattuu tanboo siif barbaaduun nu rakkisee ture. Nuti “Ethiopia waliin jiraanna, Qaama Ethiopia taana” janne jachuun kee fillannoo ati qabdu jedheen amana garuu, Oromoota yaada kee kana fi Obbo Leencoo Lataa dura dhaabataniif civil miti jachuun hiikkaa civility wallaalteeti moo maaltu civility nama dhoorga? Eegaa gaaffii hedduu tarreessuun ni dadayama garuu kanas bira kutuu filadha. Kan biraa waan gaaffii dhuma deebisaa sana keessatti beektoonni biyya alagaa jiran kuni civility waan Oromoo hin barsiisiniif kufani jiru jachuu keeti. Hedduu nama dhiba, kana bira taree Oromoon Psychology gaafa dargiin deemaa jira jachuu fi dhaadachuu keetillee jachootuma tokkoo fi lamaan bira kutuu barbaada.
Kan biraa Obbo Jamaal Oromoon diina baqatee biyyoota alagaa kana keessa oromoota jiran, akka waan Oromummaa Passportii fi koluu galtummaa gaafachuuf dhimmi itti bahan malee Oromummaa hin guunne dubbate. Kuniis, seenaa gochaa diinaa fi kanneen biyyaa baqatani bahan rorroo diinni irratti gaggeesse irraan akka tahe wallaaluu irraa akka tahe beekkamaa dha. Waan taheefiis, hawaasa Oromoo keessaa qooda fudhadhuuti rakkoo Oromoo biyyaa baafte qoradhu – akkanumatti dubbachuun waan sirraa eeggamu hin turre. Tarii ofirraa kaatee yoo jachoota akkasii kan darbatu tahe hedduun siif gadda.
Obbo Leencoon qooda qabsoo keessatti kenne namni halu hin jiru haatahu malee, jachoota Obbo Jamaal dhimmi itti bahee yoo laalle hedduu nama gaddisiisaa. Obbo Leencoonu sadarkaa kanatti takkaa akka of himee hin jirretti hubadha. Obbo Jamaal garruu “Leencoo Lataa,” nama Oromoo, Oromoo godhe, Afaan Oromoo nama barsiise, nama A12 fidee, inni silaa jiraachuu baate Oromiyaa hin jirtu turte, leencoon waaqarraa nuuf kenname, nama yeroo isaan duraati (A man ahead of his time), nama Enginerin America keessatti barate caakaa gale, Silaa Americatti dhale nama Obaamaa irraa wayyaa tahu ture, George Washington dha. Mee ammaaf kanumaan keessaa jedha, dhugumatti Obbo Jamaal Qabsoon Oromoo nama tokkoon as geese jattee yaaduu keetiif hammam takka akka wallaalummaan guuttamte garsiisuu isaa beeytaa?
Qabsoon waan sabboonoota Oromoo fi ummata Oromoo hunda gaafattu waan taheef akka gamtaa fi nam tokkotti godhan qooda qabsoo Bilisummaaf kennaitti bara baraan yaadatamu isaati. Kana dursitee Obbo Leencoo waliin silaa marihatte sigorsuu numa dandaya jedheen amana. Kana irratti mana hidhaa keessatti yeroo lafarra si bunnu sanuu hamma tokkoof daggala seenuu kee irraanfannee osoo hin tahini ayyaan laallatummaa ati garsiiftee fi waan kanneen wayyaaneen mana hidhaatti guurtee rakkisaa jirtu irratti rakkoo biro dabaleef akka tahe beekuu qabda. Ammas afaan tabba hin qabu akkuma jedhamutti akkuma garte haasawaa jirti. Garuu waan si beekuuf jacha Dr. Fatansaa (Jamaal) jedhe jachuun kan hubadhe hin jiru – yoo ammas akkuma gaafa mana hidhaa keessatti Wayyaanee dhaadhesitu sanitti ayyaan laallatummaa kee hubadhe malee. Oromoo xiqeessuun of jaalachiisuun amala kee tahuu isaa waan beekuuf jacha. Amma kaniin hubadhe tokko yoo jiraate Miseensa Gumii Sabaa ODF tahuu keeti, Asiin si gahee tuffiifii arrabni kee kun ammo eessa akka si geessu walumaan laalla.
Maayyii irratti dhaadannoo nama tokko QBO keessatti akka bakka hin qabne siif dhaamuun barbaada. Qabsoon biyyatti galchina jattan biyya keessa jiraachuu qofa osoo hin tahini diinaan wal qabdee jirti. Wayyaaneen kadhaan Democracy waan kennitu silaa tahe 1991 sanuu numa taha ture. Dilana Wayyaanee if Ethiopia yoo jaalatte maaliif baatee klu galtummaa gaafatte sadoon biyya alagaa kana keessa jiraatta ree? Oromoon mana hidhatti guurama, saamamaa fi ajjeefmaa jirt. Kana malees batani bishaaniin nyaadhamaa jiru. Ilmaan Abashaa toftaa adda addaan Oromoo lafa dhablee gochuuf saganteefattee hojjachaa jirti. Akkuma ati jatetti biyyatti galuu fi biyyatti qabsoo godhuun ADO kan duraati, kanaaf Obbo Leencoon isa duraa waan taheef galateemfatu qaba jattee jirta. An ammo yaadumaa fakkaataan kanneen biyya keessatti sosoohaa jiran waan jiraniif kuniis haarayaa miti. Galtanii isaanumaan waliin Afaan Oromoo afaan biyyooleessaa haatahu jedhaatii lafee bubuutuu foon irra qoqorame eeggachuu wayya malee akka addatti of dhiheessuun kuniis waan hin fakkaanne.
Farreen Qabsoo Oromoo saaxiluun itti fifa!
Jaal Odaa Xasee yoomuma akka Oromootti yaada laata? He did it another garbage again?
Play game with the just cause of ormo in unjust argument is criminal act on the people of oromo.
It does need a big prophesy to see how history will judge this generation,especially the activist and so called politician in diaspora.If oromo historian would not record this,be not in doubt as it had always been the “Ferenges” will right the mess of the political struggle of the last 24 years with special emphasis to absolve our political enemies.We haven’t prove to be who we say we are.
You can not hide from facts on the ground with illogical,imprudent and utter denial.There had been absolute ,ignominious failure of oromos demand for life with dignity and the right of self determination.We had been undignified,labeled as a worthless political group because of this denial.The continuation of the denial and repetition of those past mistake is suicidal for oromo cause. Further denial would make us irrelevant.The Amharas say,”Gimel seqo agonbiso,” you can not escape being visible stealing a camel.
When the premises of an argument is unjust and illogical what follows is all unjust and self defeating.No amount of radio station,televisions,articles,websites are capable to change a premises that is wrong.If we do not recognize the past mistake,build on the present wisdom and put our self on a plausible argument our performance would not hold together.Fighting the unjust government in power while we are worse does no build a momentum.What we need is a new momentum fresh idea and recognition of truth as it stands today.Further delay,postponing this urgent demand of ormo will absolutely delay or perhaps kill the just cause as it is on the brink.
You can’t give what you do’t have or you can’t catch what you don’t see.Those of us who claim to be freedom fighters should in the first place be capable of thinking freely.We should be part of the change that we want,we should live the life of the free people and surrender to the absolute truth which is the just cause.We are not morally justifiable to fight a vicious dictator while we are”Dictaatara qacalee”.It is immoral play for selfish interest of our group or our clan or our sect.The luxury of fight for individual power marshaling ill educated criminal gangs doesn’t need a microscope to see.It is glaring in a broad light.All the visible people behind the writer of this article are from one village and they negotiate with “daminas” or head of religious group for a very short time political gain.They use people with a very bad track record under derg or Woyane who are jumping from one crime to another crime because our public is not capable of challenging them with good knowledge of civil liberty.They are not accountable for their action because we don’t have an institution to hold them account.This give us a free ride on the oppressed people in diaspora and at home.
If rationalism does not prevail,if honest debate doesn’t calm us down,if we dont learn from our glaring mistake and intend to build learning from failure,if we use convicted criminals against the just people of oromo cause,if the populace is unable to stand up for it self,if communities are not organised free from interference and promote they daily life,if people does’t make a meeting and discussion even in diaspora what is the future???.If we are not even free in the free world of the west where shall we be free ???Is that not a very tragic,unspeakable paradox to our just cause??? Criminal gangs are being sent by lackeys of the so called politician to disrupt civilized meetings.Is that not what TPLF is doing at home against its opponents.I am sure those who do in diaspora can do what is worse than this or unspeakable act of human right violation if is at home or in the mountains of armed struggle.With out being on the upper moral ground how can we defeat a very organised well knit and marshaled opponent????Victory begins by moral victory that is a political surprise and we absolutely lack that element.Some would deny this moral depredation and congratulate themselves and glee in victory which is immoral.The cacophony of our village boys should not mislead us.There are dispassionate spectators in the field and every body is under the Hubble telescope of history.
In such circumstance what will be the future of our people???????????????.Does it need extra intelligence, that as we are today the political program of the government in power to “minoritize” us is difficult to accomplish?????With the government in power building all the ties with global corporate to get more rooted,do we afford this denial of justice among our selves???.Is a debate or character assassination over the last 24 years built us better or is it killing the remaining seed of our hope and future.Can oromo and oromummaa survive the onslaught of our opponents who are well organised and knit give us the luxury of internal bickering at the cost of the just cause of our people.How would this generation be judged in the face of this???I am not a subscriber of the famous proverb,”Danddeeynu ni buqqifna,dadhabnnu ilmaan itti gudifna”.This proverb was right when it was said because the oromo people didn’t have the luxury of knowledge and communication in those days and they did what they could and we call them heroes for what they did in a very impossible condition,but today we did not do any major job over the last 24 years than yearly celebration of events of the past.We are morally wrong to bequeath to the coming generation the job we are not doing,the death we are not dying,the suffering we are not suffering but never hesitate to inherit it.Are we not in total failure at all corners,twists and turns of our argument.
what led us to all total absence of conscience,self observation, introversion or turning the light in ward??.My answer is the greed of power which will never ever exist as it stands today.Freedom is not free.It builds on bones,blood and souls of honest people.Our motto when we said,”yes we can” were these.Not the antithesis or a paradox of that.what is visible,palpable and for all oromo to see is the evil of greed dismantling the essence,the kernel of our social well being .Why is greed so deep among the so called political class,if there might be any to exist or worth calling them???This is because of our background,inheritance from the system we have grown in.We go to school to make life in the Ethiopian empire then as we get opportunity,if some are lucky see how the people in power benefit themselves and their inner circle. Going to the school is to make ends meet,then we entitle our self to be politician to saddle on the back of the people who are already exhausted to the limit.This are not what the people of oromo least expected of their liberators to be,they dreamed of people’s servant who would live a saintly life and give light and dignity they have been deprived of.The poverty of social back ground,the poverty of economic back ground are inescapable factors in building our characters,thus such background is dangerous unless immersed in the water of liberty,freedom and sacrificial lamb.We are not who we say we are and the future will judge this.I made this remark because of my observation of the background of economic upbringing of the vicious group in diaspora.Poverty can extremely affect us to level of criminality.All the underworld in oromo websites social media and even a television is the reflection of that.This is the creation of being oppressed even those who are greed are because of the unjust system we had been brought.We can not afford to perpetuate this evil of politicking for economic gain or creation of imagination of if I would be in power.The power belongs to the people,you compete in free and fair election and get it.We dont hate TPLF because they are Tigreans we say no to them because their politics emanated from extreme poverty ,I call the politics that starts in the entrails.entrails does not have ideology,they are just pushed to the limit by economic grievance.”Esk meche sidet, esk meche niqet” they used to say.Thus the greed for the non existent power among diaspora oromo is political greed for for economic success,not the just cause of the people .If we are people of the just we dont need all scribble of mine,just self observation would have sufficed.Just people constantly make self observation even when they are right,just to make best even when they are better.
@ Gutaa Damoso,
You must be one of the oldies that can’t express your ideas in Afaan Oromo but hide behind the defeated and lost ideas of ODF to resurrect the dying & decaying Ethiopian empire under the banner of Oromos just cause. That is why you frequently use the habesha proverbs and wrongly use the Oromo terms.
You talk about freed and free and fair election in the future free Oromoia. But, you are killing and attacking repeatedly those who are fighting for the freedom. You worried much about the playing rule, interrelationships, democracy, rule of law, when there is nothing in Oromia and at our hand. Instead of focusing on enemy that is setting the rules and laws for us on our own land, you guys are making Oromo nationalists focus on internal rules and respects, rule of law and elections in no where. Just go out and fight with the new generation. We are tired of your endless English grammar’s and English language abstractions! You want the current nationalists to respect the yesterday who are betraying the just cause. There is no way that our just cause is compromised by any body, what so ever! Unless we remove the oldies who didn’t want respect and want to sell us to enemy, there is no focus and mobilization on our enemy.
Duraan dursee nagaan koo isin haa gahu jechaa ibsi isin baaftan ana hin ajaahibsiisu maaliif jennaan nama waan inni nyaatu beekan waan inni udaahu hin gaafatanii.dhiifama akkas jechuu koof dubbiin salphoon nama guddaa salphaa dubbachiiftii yoo jechi kun siif galuu dide siin ibsa ballinaan ibsa innis Obbo leencoo Lataa ati xiqqeessitee ilaaltu kun waan guddaa hojjatebiyya dhaqee dheebi,uun dhagahameera moo hin dhagahamne deemmaa fi deebii isaa media hundatu haasahaa ture hayyuduree dubaitti niitii fuudhee ilmee dhalchetu hagana dhagahamee kkkkkkkkdhiifama kana jechuu koof hedduu afaan keessan ajaahutu na dubbisiisee dhiifama garuu utuu dhaabdanii woyya ani dhuufuu isin ertiratti dhuuftan quban qabaa
Obbo Raayya xalayaa sirritti dubbiftee jirtaa? xalayaan obbo Leencoo tan tuyxu natti hin fakkaatu akkanumatti bubbisuu dhiisi. Warra bitamtuu fi kashlabbee qabsoo xiqqeessuu barbaadu irratti xiiyyfachuun waanuma qabsaawaa tokkorraa eeggamu. Dhuufuun kan waanuma nyaatu hin beeyne garaa of bokkaysu akka keetirraa dhufti.
Lateo asitiis akkuma aadaa Paltalk keessatti xibaarta. Garaagarummaa sarara akkanaa fi Paltak akkamitti wallaalte? asitti nama tokko faarsuuf namni yaada wal jijjiiratu hin jiru. Dhugaa jirtu xiinxala. Yeroo akka amma dubbisaa jirutti Dr. Fatansaan nama arrbsaa ture ilillii ol darbaa kan dura dhaabbate manaa arihaa turte, amma garuu namni ati ariituu fi yaada kee fudhachiiftu hin jiru. Nama sadi gane irraa maaltu eegama jateeti. Ammas numa ganta. Kun hundinuu waan deemtuuf beekuu dhabuu fi akkuma biyyatti daddeebitu sana bassaasummaa achii fudhattee dhufte asirratti facaasuuf yoo tahe malee. Itti hin milkooftu, paltalk irratti mic qabattee farshoon of jaanjeesitee kurriftu saniimiti dubbiin. Safuu horadhu. Namni sibeeku jira. Aniis akkuma Galmee Dhugaa kana si saaxila.
Obbo Odaa Xasee tiif Safuu Oromummaa isaa mirkineesituuf maaltu si gaafate. Waan barreesse irratti yaada qabaattu kennachuu malee akka oromooti yoo yadda jachuun kee maali? Yoo inni barreeseef Yaaddaa qabu barreessuun Oromummaa laalti. keessaafu, Oloola QBO irratti ooffammu dura dhaabbachuun akka oromotti yaaduu dha. Waanuma barreefame kana kan dubbifte hin fakkaatu.
Safuu siif haa tahu
Do you know this? There are other Oromo be it relatives or friends and so on who are members of others including OPDO, ODF, and so on. Stop attacking to each other and focus on liberating Oromo and Oromia if even your rhetoric would bring a change. Stop dividing Oromo and oromia!
—-Maalinii Jeennaani, gowaani galee niittii dhaane!
Odaa Xasee barreeysuu akkamiin hubatte? akkamiin hubattan??
Odaa Xasee imaan oromo dhiis please deema diinna Oromo ajeesa…Great Oromia, Abbaa Oromiyaa fii Dr Jamaal Oromoo qulquluudha hubadha
Obbo oromoo oromoon wal dhuuftee diina irratti bobahuu kan jatte barbaachisaa dha. Kana yoo jannu garuu oromoo tahini kanneen diinaaf bitamanii fi yaada diinaa oofan akkasumas Qabsaawoota irratti olaluuf ergaman hin saaxillu jachuu miti. Waan tahee orommummaa fi yaada diinaa tarkaanfachiisu addaan beekuuniis barbaachisaa dha. An barruuu tana namni barreesse yoo dhugaa tahe, jarri kun saaxilamani oromoon beekuun dhaabbachuu qabu.
Namicho akka Oromotti yaaduu isaa beeyteetu Jaal jataani moti? Akka Oromotti yaaduu isaarraa Kashlabbee fi bitamtoota Qabsaawoota oromoo irratti oloola ooftu saaxila natti fakkaata. Barruu tana nama barreesse hin beeku garuu kan dubbise keessatti safuu dhabiinsa tokko hin agrre. Kan safuu hin qabne namoota lolee itti du’ee oromiyaa dhiigaan fide arrabsuu fi seenaa balleessu tahutin hubadha.
Odaa Xasee…Daawullaa Seatile kana ciisee ilmaan Oromoo irratti olola osoo oofu kofoon irratti dhumte. Odaa Xasee , silaa ani si ta’ee dura qabsoo mana kiyya keessaa jalqaba. Ijoolleen tee osoo gurra illee muranii Afaan Oromoo hin beektu. Why you have such a big mout before you even take in care of your own house. Hey Mr Xasee…by the way, baalagummaa kee Oromoon addunyaa hunda jirtu akka beektu quba qabdaa. Namoonni ati irratti duultu. FKN Dr. Jamaal, nama gaafa ati albaatii jigisaa dheessitee biyyaa baqatu , osoo qabsaawuu mana hidhaatti darbamee reebamaa ture. Actually, Xasee ABO ati biyya alaatti itti dabalamte malee, waan hin beekneef sirra hin ilaallu. Garuu akka salphataa jirtu hubadhu, yaa wadala naamusa hin qabne.
Civility waan barreeffame tokkoo ilaaluu hin dhiiftanii? Waan namni “Aanolee” jedhamu barreessu kun safuu Oromoo kan hin eegne dha. Odaa Xasee, sanuu nama asirra hin jirre, “Daawullaa”, “ijoolleen kee Afaan Oromoo hin beektu”, “albaatii jigsaa baqatte”, “wadala”, kkf, kunneen afaan nama safuu hin qabnerraa darbatama. Tokkoffaa, barruu kana kan barreesse Obbo Odaa ta’uun hin mirkanoofne; speculation irraa ka’anii akka kanatti nama xiqqeessuun fafa dha. Lammaffaa, Obbo Odaan akka nama tokkootti deemsa ODFis ta’e kamiinuu qeequuf mirga qaba. Itti fakkaannaan “Gantuu QBO” jechuufillee mirga qaba. Hundi keenya deemsa ODF qeeqaa turre, qeeqaas jirra. Egaa arraba fokkotaa akkasii maal tu fide? Namuma manasaa jiru waamanii jechoota fokkotaa akkanaatiin arrabsuun sirrii miti. Warri Gadaa.com akkan kanaan dura beekutti waan barreeffamu ni gulaaltu ture. Amma maal taatan?
Ijoolleen ofii biyya alaatti dhalatanii Afaan Oromoo wallaaluun waan haaraa Odaarra ga’e miti (yoo dhugaa ta’e). Hundi keenya ijoollee keenya waliin wallaansoo qabaa jirra. Kanneen milkaa’anii ijoolleesanii Afaan Oromoo barsiifachuu danda’an biyya alaa kana keessa lakkoofsi xiqqaa dha; dhugaatti isaan galateeffamuu qabu. Hedduun isaanii kanneen harmeesanii Ingiliffaa hin beekne biyyaa fidanii akka ijoollee guddisan taasisuuf carraa argatan faa dha. Aanoleen tarii ijoollee hin qabdu ta’a jedheen shakka. Utuu qabaattee (utumallee ijoollee kee barsiifatteetta ta’eellee), asi biyya Ameerikaatti ijoollee afaan barsiisuun hangam dadhabsiisaa akka ta’e numa beekta turte. Mee bakkuma jirtu ilaali. Nama meeqa tu milkaa’e jetta Afaan Oromoo ijoollee ofii barsiifachuutti? [Warra qabsoo godhanii itti milkaa’an nan dinqisiifadha]. Kanaafuu obboleesso, kun arrabsoo ta’uu hin danda’u. Hundi keenya guyyaa jireenyaaf oliif gadi jooraa oollee galgala yeroo xiqqoodhaaf ijoollee keenya argina. Yammuu manatti gallus hojii hedduutiin qabamna. Keessattu kanneen QBO keessatti akka Obbo Odaa faa qooda qaban, yeroo dabuudhaan utuu hin beekiin ijoolleesanii dagachuun waan nama ajaayibu miti. Waan hedduu keenyarra ga’ee fii ga’aa jiru dha.
Karaa biraatiin ijoolleen ofii Afaan Oromoo dubbachuu danda’uun qofaasaa sabboonaa nama hin godhu. Namoota hedduun beeka, kanneen ijoolleesanii Afaan Oromoo sirriitti barsiisan; garuu bakka QBO jiru kan hin beekne. Karaa biraa ammoo, Obbo Odaa dabalatee kanneen QBO keessatti qooda olaanaa qaban, QBO bakkaan ga’uuf galgalaa ganama kufanii ka’an, garuu kana keessatti ijoolleesaanii Afaan Oromoo barsiisuu hanqachuu duwwaa utuu hin taane, guddina isaanii bifa hundaa utuu hin beekiin dagatan hedduu tu jira. Qabsoon waa hedduurratti of-wareeguu si gaafatti. Kanneen keessaa tokkos maatii keetiif yeroo dhabuu fi kunoo akka kana ijoollee keellee dagachuu faa dabalata. Kanaafuu Obbo Aanolee, dubbii gamaa gamanaa madaallee ilaaluun gaarii natti fakkaata. Safuu Oromoos eeguu wayyan jedha.
Obbo Aanoolee, warra paltalk irraa xeenan tokko fakkaatta. Ijoollee J. Odaa eessatti beeyta? tan ijoollee namaa dhiisii atuu waan barreesite sirriti laali! kkkkkkkkkk. Kan gara biraa J. Odaan gaafa qawwee qabatee lolu siifi Jamaal oromummaa keessanu hin beeytan ture. Namni salphaan yaada dhiisee namarratti xiiyyeefata. Maaltu akkanatti si boochise? viva J. odaa nuuf jiraadhu.
Akkasumas namni xalayaa tana barreesse haa jiraatu. Ittisni qabsoo godhamuu qaba. Yeroo ammaa keessatti Wayyaaneen bassaasootaa fi ergamtoota isinii diinadgee hedduu itti baaftee paltalk fi hawaasa keessatti gadi naqaa akka jirtu oromoo beeka. Atiis yeroo yeroon jala buutee saaxiluu keetiif galata qabda.
Wherefore your arguments finished some Oromo, strengthen TPLF on the weakness of Oromo, your rhetorical value magical forces merely aired out of a scene! Foolish, be practical! Reserve your soliloquy to tutor on the free Oromo and Oromia after decolonization. Your loquacious is out of place and time.
I said again, stop to fight to each other! Your veracity in a false ominiscence has no value.
What Oromo and Oromia needs in simple language is defense and decolonization (destroy foe’s resources, mobilize international partnership and build positive relationship, strengthen Oromo Community, help refugees, design and implement reengineering)from Abyssinia.
Even you never be able to write a correct sentence in Afaan Oromo that as if you were quoted it.
Hojii diinaa fi ergamtoota diinaa saaxilun qabsoo dha, barruu dhugaa irratti hundawe.
Odaa Xasees yoo tahe namnni barruu tana barreesse qalamni kee haa mirgisu, beekumsas siif haa dabalun jedha. Warra waan deemtuufs hin beekne gara itti adeemtus hin beekne bitamtootaa fi ergamtoota diinaa jala yaatu tana hin dhagahin,qabsoo yoo taheef kaleessas itt dabalamtu harras ati kayyoo lubbuu kumaatamaan as gahe hin gurguratnne ati ofitti booni dubbadhu barreessis
Lafeen gaarren oromiyaa irratti cabee fi dhiigni golee oromiyaa hundatti dhangalahe warra kaayyoo tana gurguruuf yaatu hunda ishee hin gadhisin bara baraan haa salphattu
Jabaadhu si waliin jirraa
Abbaa Gammachuu Reply
“keessa namaa hin beeytuu keessa qabattee namaa kennitii”jedha oromoon yeroo waan qabsoo oromoo irraa haasoftu akka nama qabsoo oromoo beekuu fakkaatta.wanni ati hin hubatin dhaabni ati bakka buutee horofa laayxu kun akka ati osoo ittin hin yaadin dubbattu kanaa miti .Dhaaba ija duraa fi duubaa qabu ture erguma kan akka keetii kun itti makamee duraa duubaa jaame.Osoowanna beeytu irraa haasoftee ille nama hin dinqu,garuu waan hin beeyne tan dirree qabsoo ti fi tan mana hidhaa waan takka irraa hin beetu wanni ati beeytu oromoo gosaan adda qooduun hujii kee gudda ta’uu nama ifatti sitti himu dhabdee gadi baatee akka saree nyaata quuftee afaan namatti haqatta ciiftee gayyaa dhugaa oromoo walitti naquu beeyta.Mee qawee hidhadhuu farreenitti wayyaanee dabalii saaxili silaa ajjeesuuni soddaatta
B waaree Reply
Farreeni fi gantoota saaxiluun qaama qabsooti !!! galmee seenaa waan goote gaariidha akka nama oromoo tokkotti waan beeytu afaan tartiiba qabuu fi naamaf galuun ibsite galatoomi.kan biraa Lateo oromoon waan jette dhageeysee? namni galaannii fuudhe hoomacha qaqqabataa ja’an .atiis fii jaarmayni keetiis sanuma godhaa jirtan hongee siyaasaa mudattaan wareegamtoota oromoo salphisuu fi xiqqeeysuun waan kabsattan isiinitti fakkataa? gootummaan ati nutti dhaadattu biyya dhaqanii policiin sadarkaa gadii tokko hatattamaan dafii bahi yaroo ja’an batachanii bahuutu gootummadhaa? maliif biyya tiyya keeysaa hin bahu je’ee achitti wareegama joolleen oromoo kafalaa jirtu hin kafaliin ?.ofiifillee salphatanii oromoollee salphisan presedent keeysan .amma dammaqinsi ummata oromoo bakka irra jiru waan isiniif gale hin fakkatuu maraataa fi jonjawaa hunda oromoo irratti hin bobbaasina adabadha ummata irraa ta’a.
jechuma media irratti waliin ja’anillee laaladha !silaa qaanii fi safuu oromoo keeysa baatani .
Tafari dafo Reply
Galmee Dhugaa enyutu si baataa?Dhara moo haqatu sirraa mullataa?Halluu kamiin barreessite laataa?Dhiiga moo bishaantu irra ulfaataa?Dhugaa arraabee galmeen kee dhara baataa?Of irraa si dhaabna moo ni dhaabbattaa?Dhugaa waa,ilfannee lakkii ni moohamtaa?Kabajaa argattaa hayyuu xiqqiissitee?Galmeedharaan galmee dhugaa jettee?Silaa haqa hin haaltuu soba waa,ilfattee?Ragaa sitti haa baatuu ekeraan goota dhumattee!Baddaa fi gammoojjii bakka itti haftee kaatee!Galmee dhugaa jettee maqaa moggaafattee?Dhugaan si haa hiituu guuza sitti baatee!Milkiidhaan hin galin amna harra kaate.Okkolaa deebi,i qoraattiin si dirte.Ciisa si haa dhortuu kulkula sitti taatee!Aara hin argatin sammuun kee boqotee!!!Marsaa itti aanutti wol argina yoo itti deebite.
Ajab, Ajab – Dhugugaa jirtu dhooysuun Qabsoo Oromoo keessatti dhaabbachuu qaba kan jedhu amana. Namni dhugaa dubbate ilaalcha addaa keessaa fu yaada dhaaba tokkotiin jacha arrabsuun safuu oromoo akka hin taane hubachuun barbaachisaa dha. Galmee dhugaa xalayaan ati barreesite kun gama kiyyaan hedduun itti gammade, itti fufu siin jachuu barbaada. Warri safuu hin qabnee fi xalayaa barreefamtu sirritu hubachuu dura arrabumatti fiigan akkuma atuu lafa keesse kashlabbee fi bitamtoota.
Qabsoo fi qabsaawonni yoomiyyu dagatamuu hin qaban. Karaa fedheenu kan isaan xureessuu barbaadu saaxilamu qaba. Warri asirraa computer duuba taa’aani akka saretti duttan warra qabsoo godhurraa dhaabbachuu qabdan. Eergaa Wayyaanee asirratti dabarfachuuf yaaddan namni isin dhagayu hin jiru. Xalayaan tun tan barreefamte dhugumatti obbo Odaa Xaseetiin yoo tahe, akkuma amala keessanitti booyaa. Gama kiyyaan akkanatti isin boochisuu isaatiif galata qaba.
Horrdofaa quufaa Reply
Aheey jedhe ballaan boordoon jalaa banaan.
obbo tafari, abaarsa tarreesitus dhugaan tasa hin dhokatu.
Gadaa Meelbaa Reply
An wanni na dhibe yoo jiraatte, akkamitti namni seerluga Afaan Oromootuu hin beeyne, Oromoo fi Oromiyaafiin qabsaawa ja’ee mataa if dhukkubsa? akkamiin hogganaa ABO tahuu dandaya? namni barateeti dandeeytii barumsaa qabaatee akkaataaf seera bulmaatallee baratee waa bulcha moo biyyuma Faranjii jiraachuuf Hoggana ykn bulcha taha?, Wannummaan QBOtuu hidhe hubannoon malee akkanumatti if tultulleeysanii qabsaawaafii hogganaa if godhuu tana. Akkamitti namni dhaaba tokko bikka bu’ee niin hoggana ifiin ja’u akka joollee barandaatti qaanyii takka malee jechoota fokkotaa akkasii ja’ee nama arrabsa? Oromoon waan jatte ” Gowwaan hin dhalatin, dhalatullee hin guddatin” jattee mii ree…..
KKKKKKK Utuun si tahee waan Dhaabaa maqaa hin dhahu Abba Ganssiis ati Dhaaba eessatti beekta nama jala ce’uu male ,wrra dhaqee salphate irra iyyuu kan lama salphate si’i “akka uumtetti ajjeesi jennaan qulla ajese jedhan” kanuma ammoo arba badda balagee waan qabsoo eessatti beekta “laga marqaa jennan hundumtuu boojitoo guuree ya’e jedhan” kan miyawaa qabsoo beeku yoo rakkoo qabaate afaan isaa qabatee taha malee akka kee Dhaaba dhiisee nama duukaa xulxulla isaa raasaa muu gogi.
Abbaa Oromiyaa /Caffee Raammis Reply
Amaloota qabsoo teenya duubatti hanbise kheeysaa takko kanuma. Barruun Obbo Odaa Xasee barreeyse kana akka fakkeenyatti fudheen waan takka isin yaadachiisuu barbaada. Qabsoo Bilisummaa tan godhaa jirru kheeysati haalli Qabsaawoota yaadumaan wal-dhabuuf alagatti galchuu ykn matumaanuu oromummaa irraa mulquu kun waan Jaal Odaan eegalee miti. Eega qabsoon teenya oromiyaa irraa baatee baqatummaa mudattee khaasee Hogganooni ABO laafina ykn kufaatii isaanii dhoyfachuuf jecha jidduu isaaniiti wal yakkuu bira kutee Miseensootaa fi deegartoota jaarmaya kanaa maqaa hin jirre itti maxxansu. ABO tokko tahee biyya (oromiyaa) bahe arra ABO 7 tahuuf sababbiin kanuma. Namni hujjii dhabe xaafii gad naqeeti guura jetti manguddoon teenya. Arra Hogganooni ABO wal nyaachuufi wal facaasuu malee hujjii sabaa hojjachuu waan dadhabaniif akka hujjiiti kan ilmaan oromoo diinoomsuufii alagoomsuun hujjii isaanii tan olmayaa fi bultiiti.
Obbo Odaa Xasee eenyuu, qabsoo oromoo keeysati qooda maal qaba, yeroo qabsaawoota dirree qabsoo kheeysatti qabana, beela, dheebuu fi rasaasa diinaatiin gubachaa bahe, qabsaawoota mana hidhaa wayyaanee kheeysati baroota dheeraaf cafaqamaa ture Internet gubbaa taa’ee abaaruu innii hoo eenyuu je’ee kan gaafate jiraa? Obbo Odaa Xasee bara ABOn bu’uramtu EPRP ture. eega Dargiin warra EPRP lafarraa haxaawuu eegale dheeysee qabsoo oromoo ABOti dabalamee ji’oota 3 Bosona baha oromiyaa leenjii irra ture. Ba”aan qabsoo itti Ulfaannaan halkan gurraacha waraana xiqqaa wajjiin jiru jalaa qawwee fudhee badee Jibuutii seene. Jiruutiitti sabboonooni Oromoo kan achi jiru akka badee gaaraa dhufe dhagayanii fitti yaamanii gaafannaan sodaatee garee EPRP tan Jibuutitti baqattee wajjiin baqattoota oromooti duuluu eegale. Boodarra manguddoota oromoo kan achi jiruu miilarra kufee community oromoo ti deebi’e. Osoo hin turin Raashina (nyaata) UNHCR baqattoota oromootiif kennite jalaa fuudhee Amaaratti gurgurate. Obbolleeysi isaa kan yeroo san North America jiru yakka inni ummata isaa irratti hojjate kana dhagayuudhaan Sponsorship godheef duraa akka balleeysu ykn Raashina gurgurate akka deebisu gaafatee sababbii Obbolleeysaatiin Lubbuun baqattoota oromoo beelaan dhumuu eewalamte. arraaf maalummaa Odaa Xasee kunuu ni ibsa je’een yaada. Odaan Qabsoo oromootiif kheeysumamadha ykn haaraya. qabsoon tan sarara paltalk yoo taate Goota paltalk jennuuniis itti hin xiqqaatu. hundaafuu nagayaan.
Caffee Raamis ati kijiba kana maaliif hin dhiifne. Xurumbaa paltalk irratti ooftu amma asitti fidde. Obbo Odaan qabsaawota oromoon qabdu keessaa tokko. Nama akka keetiin nama hadheefamu ykn arrabsamu akka hin taane atuu numa beeyta. Mee amma ati ofiifuu eenyu. Gaafa, Qabsotti dbalamte maaliif achitti nudhiifte osoo fiiyduu qaraan si dire. Mee yaadannoo akka siif tahuuf kofoo kee ofirraa ol qabii laali. Sana booda Qawwee Addee Asliin faan si hidhachiisan irkiftee eessa akka deemte atuu beeyta. Nama meeqa hiisifte atuu beeyta. Erga as dhuftees abbaa kiyya ABOn narraa ajeefte jattee paltalk irratti himaa turte. Abbaa kee kan Dargiif osoo basaasu du’e aqabattee ammas wayyaaneef bassaasaa jirta.
Namni akka keeti obbo Odaa xasee milaahu dhiquu hin dandayu. Yeroo Oromoo hundi dhaaboota adda addaa keessa turtettiinis yoo tahe maltu rake. Dubbiin amma maalitti jiraa? qoodni inni kennaa jiru maali? kan jedhuutu laalam. Kanaaf waan hin beeyne xibaariin.
Oromoo akkuma paltalk addanatiis xibaaraa jirtu. Barruu dubisani dharaa fi dhugaa adda fo’achuu dhiiftani nama kanaatu barreese santu barreese jatu. Obbo Odaa beeka, sabboonaa Oromoo dhaabii cimaa qabu. Barruu isaa hedduu dubise kanaan wal hin fakkaatu. KAn na gaddisiise kashlabbeen takka asii ijjoollee isaa afaan hin beeytu jachuu isaati. Ijoolleen isaa addanatti dhalatan malee maqaan isaanii hundi oromoo ndha. Oloola daangaa dhabe kaachisuun diinummaa dha.
Iddoo namni waa dubbisee baratu barreessee wal basiisu dhuftani fagaara keessan banuu dhiisaa ti achumatti wal arrabsaa. Sabboonoota Oromoo kan akka obbo Odaa dhiira yoo taatan isuma bakka inni jirutti gaafadhaa. Asii wacabbaruun xiqeenya keessan garsiisa.
Mee ODF ykn lencho fi Jamaal kasaaruu irraa maal arggatta?
ODF ilmaani Oromoo hidhaa jiraa? NO
ODF Qaabeenya Oromoo saama jiraa? NO
ODF dubaartoota Oromoo …jiraa? NO
TPLF simmooyyeetu jiraa? Yes
TPLF Qaabeenya oromoo fudhaateetu jiraa? YES
ENYUUNI DANDEESSAA? ODF
Kaanii danandeessuu dhaanii jeenanii gowwaani galeetu nittii dhaannee jedhuu.
The author is the least to say he/she is timid
You seem to be the LEFT OUT from our politics. You talk about the unjust premise and
present wisedom. You don’t explain them. There is no hint of your stand. You may not have one. That is why i called you LEFT OUT. And you seem to be angry and agitated. It is not a good sign for your health.
please check your blood sugar.
The GALTUS at least have come out and declared their stand.
Eventhough, they made a wrong
turn, they have guts to stand for what they believe. Yours is the worst and the lowest.
You got to be on one side. Otherwise shut up.
Hedduu galatoomi…Jalqabde malee maalummaa Abubakar ilma xasee, hedduutu jira. Nuti worri Djibut tyrre waan sirritti beeynuuf gadi baasuuf jiraanna. Gaafa gaaratti qawwee gatee baqatee Djibuutii seene waan jedh hin dagatinaa.Akkana jedhe. Abubakar Xasee Qabsoo keessaa maaltu si baase ? jedhanii gaafannaa, Ani Jaarmiya gabaree (qotee bulaa) keessaa maal godha jedhee deebise. Abubakar akka odaa xasee, biyya alaa kanatti erguma miseensa ABO ta’ee jalqabee hujiin isaa kanuma ture. Ilmaan Oromoo wal nyaachisuun hujii isaa ti. Nama dictator akka isaa hin jiru.Hundaafuu mataa jirutti shaashii maranii, or ufiifuu duutii maaf if huutii” akkuma jedhan, worra isan hin beekne dibbee haa rukuruufii, saricha kana immoo qarqara hawaasa keennaa akka inni hin geenne jabaannee uf irraa eeggannaa.
Anoolee/Gaachana ati eegee namaa raasu yoom dhiifta? Olooluma akka Paltalk irratti ooftu asitiis oofaa jirya. Nama xiqaataa gandummaan guutte bakka see me judatti kidsare tahuu kee namuu beeka. Takkaa waan namni ja’u Kala seentee arra kaan boru kaan dhaadheessa fi gaararraa tahuu kee kan si beeki beeka.
Obbo Odaan Namoota akka keeti if yeroo kan qabu akka hin taane beekkamaa dha. Waan Fatansaan dubbatanu joollee gammoojji innings arrabsuu oleef ilillii dabaa Ooltewah amma asii odaa arrabsita. Gaafa ati gandummaan demeter ABO diiyne jatte utaalaa ture akka dhukkeen sitti kaase walumaanu beeyna.
Qabsaawa akka odaa irraa dubbachuu dhiise dhiisa mila isaatti hin geettu. Deeming wayyaane jala ciisi.
Raamis Gadaa Reply
Aanoolee ati amma qotee bulaa tahuu keeti? maqaa Hummoo silaa baafatte irra wayya akkuma namni nadura barreesse siin jedhetti. Mala paltalk keessatti ofii bookisuu malee nama yaada keetiin mormu akkuma diimaa fi bounce godhuun reebdu sitti fakkaatee? Kun sarara namuu walabaan yaada isaa ibsatu. J. odaan Diktaatara jattee kkkkkkkkk mee deemi akkaataa mana kaan cuftani kaan bantan akkaataa ololli keessan deemaa hin jirree hubachuuf yaali. Diktaatarri kan akka keeti namni yoo akkuma keetitti waa arrabsuu didu ariituu fi diimaa irra keessu dha. namooni akka keeti carraa argatani biyya jiraatan warra nama fixu. Kanumaafu kadhaan keessan isiniif hin milkaawu.
Raraasaa wayyaanee jalaa baatan tan oromoo jalaa hin baata. Adabbaan afaan hummoo kee walitti cufii nama arrabsuu dhiisi. Deebisaa barbaachisu namni siif kennuu fi kan sirriti siis beeku akka jiru hin irranfatiin.
Galmee Dhugaa – jabaadi. Kashalabbee akka kanaa faaboochisi.
Obbo Gaachana hawaasa Alanfatee yoom akka situfe otuu beettu hawaasa kamirraa J. Odaa dhoorgita. Shamaa namaa. Kan akka keetii manatti galcha trees deegarsa Oromoo kumaatamaan qabaadhu isaa beeki. Wallaala tahuu kee ofitti beeki. Dhiira taatu isatti dubadhu huummoo.
Nagayaan kiyya isin haa geeysu jechaa Odaan qabsaawaa eenyuuti?Kan qabsaa’ota haqaa waan yaadaan siin adda goreef gadi-fuutee alphiftu kun maal akkature of beeyta mitii?Gaafa iyaapaa keessaa dargiinbooji,amtee uuu qabamtee konkolaataan utuu deemtuu konkolata irraa utaaleen baafadhe jettee ijoollee nama shanii wolii atii fi Dr baaan Asoba wliin nama shan (5)taatanii dirree qabsioo dhuftanii ati ji,a sadii(3)woaaa keessa turtee gantee jibuti deemte.Sababa Haate kee hissa turteef ganda hissa quphatte.Yaro sanatti jarmiyaan baqattootaa amatu ahi ture 1 iyaappaa kan turan kominiti Ethiopia ti.2 Ijoollee oromoo kan tahan ammoo oromo ifji ni jibutitu ture.kan oromoo dhiiftee kominitin etiopia daakuu fi hiree biyya alaas waan namaa kennituuf kominitii ethiopiatti daramtee utuma hin turin dura taa’aa kominitii ehiopia taate.Dubbii baqataa oromoo irraa sitti kate obboleessa kee bira dhaqqabe obboleessi kee ammoo dhugaan sabboonaa waan ta”eef durata”aa ijoollee oromoo kana ture.Hiree ati kominitii Ethiopia keessaan argattn si jalaa balleessaa komniti Ethiopia keessaaakka baatu sidirqee jennaan baatee sababaa kanaan keeziin kee j,a ja,aaf boodatti harkifatee dhuma irratti baarte.Seenaa kee kana fakkaatutu harra rabbi wol si qixxeessinaan Dr Jamaalii wiin wol qixxaachuuf jecha jalee kee irraa dubbi dharaa guurte.Dhirsaa niitiin si bira jiran ammoo Alii Xaahaa namni harra waahilfatte kun Araarsoo wodaay akka ajjeese ni beeytaa niitiin Ali miilla maoofte sun tigireetuna dhahe jettiikkkk safuu langahi fi wateri fi langahi gidduutti makiinaa gubbaatti qaswween isii barrakee rukute kan biraas jiraa yaroo biraa wolitti deebinaa nagaatti
Marartuu waan kana barreesite rabbi haa beeku. Amma atiis oromoo ofiin jattee qubee akkanaan barreesita? oloola nama hin beeyne irratti dhiisi. Tanduraa Obb Bayaanii fi Obbo odaan yeroo tokkotti gaara hin seenne. Lammafaa Obbo odaan Dura gara Somalia ti bahe. Achi gaafa ture waan inni hojjachaa ture nu warra waliin ture gaafadhu. Akkanumatti haqqisuu fi afuufuun hangam takka akka waan hin beeyne laaqaa jirtu garsiisa. Dura deemi qubee baradhu. Obbo odaan nama akka keetiin arrabfamu ykn maqaan xuraawuu miti. Kumaatamaan isa duuka jirra. Si dhiisii Wayyaaneenu humaa godhuu hin dandeessu.
ODF MQBO fi ilmaan oromoo facaasee jalee diinaa tahuun umurii diinatti bitaa jira yakkamaa,abaaramaa fi farra uummata oromoo ti. duris iccitii MQBO diinaaf kennaa ture amma ammoo yoo ABO fi WBO dhabamsiiste malee hin galtu jettee arite tigireen. kun ammoo hin jiru ilmaan oromoo hundi waan baraniif oromoo biraas tahe tigiree biraa dhumateeraaf.
ODF ilmaani Oromoo hiisisaa jira
ODF Qaabeenya Oromoo saamsisaajira
ODF dubaartoota Oromoo …….jira
Kanaaf jala deemtoti fi warri Leencoo jalaan galtee firfaarii funaanachuuf turtes baga qaanofte namnni saba fi kayyoo gane eenyuutu milkawe beeka Odaa Xasee leencaa hin tuqinaa. atalawoch .
The frastrated, depressed and
demoralized Odfites are mad,
Angry and bite every body like
a mad dog. Why they attack this gentle man, obbo Odaa
Xaasee. It is clear that they are venting their dissatisfaction with their master’s refusal of re-entery to ethiopa. But they are putting their frastration at the wrong place.
Obbo Odaa xaasee is a very strong oromo nationalist. He
knows what he believes. He is
an indipendent man. I admire his judgment. He never condemned even odf. I remember
at one public meeting, He said
about odf: ” karaa dugda handaaqoo isaa nif hagodhuu”.
He knew they were on the wrong
way. ODF IS DEAD FOR GOOD.
SO PLEASE HANDS OFF MR. XAASEE. THANKS.
Galmde Dhugaa ati eenyu anis ofin himaa atis of himi bakka Jaalle Nadhii Gammadaa Maqaa dhooftee kanaafin si gaafadhe? qamaan beeyta moo dhageettiidha? kana adda baafacguun barbaadee dhiifama.kan biraas Dr jamaal akka dhaaname barreessitee jirta eessatti?Garuu ani ammoo ofon beeka madoo Dr fatansaa dhaanan sun namni otobisiin fuudhee deemeee harawut mana barumsaa keessa qupsiise ana guyyaa 3 fi halkan sadii eegan tajaajilee booda Dr fatansaan ijoollee barsiisaa jiru fudhatee na bira dhufe maal irratti lolli akka itti ka,e nin baaka kanaaf mee obbo odaa xasee /soddaa kiyya dhaabbadhu sin beekaa dhaabbadhu yoo na baruu feete dhiha irraa kan dhufee jalqaba harawaacaatti nadhii eegee achuman nadhiin midheysaa nbiratti haakima fayyaan harawaacaarri ramadameedha ummataa,woraanaa fi hawwisoo caffee gadaa tajaajiluunis nin beekama raayyaa ibirahim burru maqaa jedhuunin beekama duubbee kiyya qoradhu haga biyyoo karaabaatti oromoonni na beekuu akka keetti godaannisa hin qabuu jabaadhu seenaa kee fi kan asilii oromoo dhirsaa woliin hunda nin beeka asilii oromoo wotarii fi langahi gedduutti qawween isiii itti baarakee dhahamte eenyu akka madaa sun hodhe gaafadhu?kanaaf wolaa tajaljaluun bi qalbi suutuma??????????????????????????????????????????????
Obbo Coqorsa aboo numa dhaadatte gaa? Duuba maaltu asiin si baase? Dr. Fatansaan waan mana hidhaa keessatti nu godhaa ture beeytaa. Akkan hubadhetti ati gaafa inni Hawawwee dhufe haasawaa jirta. Obbaleessoo akkan hubadhetti xalayaan tun tan jattu gaafa inni qabsotti dabalamee dha. Kan biraa ni dhawame hin jattu. Silaa dhawame qabsaawoota joollee gammoojjii abaafi haadaan hin guddifamne jedhee hin dubatu ture. Kan biraa hamman dubbisee hubadhetti hamma tokko hin tajaajille hin janne kanumaahu hin haasoftu, dhufiitii isaa irraa gara mana hidhatti dabarte.
Nama dubbisee waa hubachuu dandayu fakkaatta irra deebi’i dhubbisi.Osoo dheessu qaraan dirte fi godaanisa kan jedhe nama birootiin. Doofaa waan dubbisu hin galleef kan ammo gaaffii tarrisu suma arge. KAn biraa Asliin goota oromooti Wayyaaneef hojjachuu diddee nama gidiraa hedduu arge. Kana malees namoota akka keetii kan seenaa hin qabne akka hin taanee beeki. Waan barreesite irraa xiqqo malee kan sibeeku natti fakkaata. Mee itti daddablii barreesi gaafas waan ati taane GAlmee Dhugaa osoo hin tahini anaatu siif deebisa.
Obboo Odaa Xasee dhiifama gaafachuu:
Barruu tiyya irratti hundeeffamuun yaadoota/comments deemaa jiru gaddaa fi gammachuun dubbisaa jira. Gammachuun koo:
1.	Yaada kiyya dabarfachuu dandayuu
2.	Kanneen bu’aa QBOf hin qabnee fi beekaa tahe wallaalaan sagantaa diinaa tarkaanfachiisan akka hubatamuu taasisuu kiyyaan.
3.	Qabsaawootaa akkasumas Qabsoo Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaaf gaggeefamaa jirtu siyaasaa kisaartee/fashalteef jacha xureessuu kanneen barbaadan ifaan ifatti fi qabatamaan garsiisuu kiyyaaf.
4.	Shira diinnan oromoo keessaafu biyya alaatti, QBO dadhabsuuf hojjachaa jiran saaxiluu dandayuu kiyyaaf; Asirratti barruulee tiyya tan akka “Shira Lukkeelee fi Gooftoota isaani” faa akka fakkitti dubbisuun ni dandayama.
5.	Seenaa qabsaawoota dhiigaa fi lafee isaaniin Oromiyaa argamsiisan (bakka barbaadamu hin geenye) irratti bobbahan itti fufaan qoradhee saaxiluu dandayuu kiyya – asirrattiis barruulee tiyya kanneen duraan barreessaa ture dubbisuun ni dandayama.
6.	Kanneen Dandiin Bilisummaatti nama geessu diinnan keenya kadhachuu akkasumas kanneen biyyatti qabsooti jiran, ajjeefamaa jiran fi mana hidhatti guurrrama ajiran irraa ijaafi gurra cufannee Ethiopia Dimokrateessina jachuun diina jala kaachaa jiran ifaan ifatti akka bu’aa kaayyoo Oromoof hin qabne garsiisuu dandayuu kiyyaaf.
7.	Dalagaa manaa (Homework) kashalabbooni Qabsaawootaaf kennan saxiluu bira taree boochisuu dandayuu kiyyaatti nan gammada. Kanaaf guyyaa sadi guutuu as naqabaa achi naqabaa jachuun Paltalk irratti booyaa jirachuu isaanii.
8.	Barruulee asirratti maxxanfamaa jiran irra hedduun, jajjabeessaa fi kan dhaamsi kiyya hubatame tahuu kan garsiisuu akka tahe waan garsiisuunan gammada
Kan na gaddisiisee:
1.	Akkuma saganteeffatanii qabsaawoota maqaa xureessuuf kanneen bobbahan, barruu tiyya irratti hundeefama godhachuun namoota tuqamu hin qabne irratti akka dhidhiitata maayyii gochuun godhan carraa xiqqoo takka kennuun kiyya na gaddisiise. Hamma mtakka kan qubaan lakkaawaman tahanillee akka saaxilamuu isaani gara dabarsuuf caalatti wixxifatan qaawwa xiqqoo tanuu.
2.	Keessaafuu Obbo Odaa Xasee irratti oloolli deemaa jiru hedduu natti dhagayamuu isaa. Obbo Odaan qabsaawoota ani beeku keessaa kan daddaaqina dhaabinaa hin qabnee fi dhugumatti nama bilisummaa fi walabummaa Oromoof qabeenya, dandeetii fi yeroo isaa kennee hojjatu tokko. Nama QBO galata guddaa irraa qabdu malee kashlabboota dhaabbii hin qabne, kanneen kanuma argan fakkaatan, kanneen gandummaan guuttamani deemanii fi sammuu Abashaa dhan sosoohan, tarees kanneen lafa jalaan Qabsoo Oromoo facaasuuf hojjachaa turanii fi ammas hojjachaa jiraniin arrabsamu hin turre.
Hundaafuu, kun qabsoo keessatti eeggamaa waan taheef hedduu itti hin yaadu. Akkuma seenaan irra daddeebitee garsiiftetti itti fufaan irra akka aanamu mamii hinqabu. Oloolli isaaniitiis haaraa waan hin tahiniif waan haaraan akka dhufan gorsa. Gara biraan kan hubatamuu qabu kanneen safuu Oromummaa hin qabnee fi yaada yaadaan bifa qabatamaan dura dhaabbachuu hin dandeenyee waan maxxansaa jiranii hujjiin isaani ykn ergamni isaanii waan kana irra hin fagaanneef akka dubbiftoonni hubatan abdadha.
Hamma ammatti “ARBI QUMMUUXXOOF HIN OKKALU” akkuma jedhamutti Obbo odaan waan akkanaa kana irraa nama guddatee fi balaaleefannaa fakkaatoo isa qofa osoo hin tahiin qabsaawoota cichanii jiran maqa xurreessii itti bobahan hunda injifatee nama qabsooti jiru waan taheef akka dhimma kanaaf hin qabne abdadheen hamma of saaxilanu eegaa ture.
Amma garuu namoonni asirratti wacabbarraa jiran fi akkuma aadaa isaanitti Paltalk irrattiis xibaaraa jiran namoota qubaan lakkaawwaman akka tahe argee wanni haaroofni akka hin jirre hubachuu fi akasumas barruu tiyyaaf itti gaafatama fudhachuuf waa jachuu filadhe.
Namoota barruun tiyya garaa dhukkubse otuu waan barreeffamee hin hubatin akkasumas kanneen qabatamaan QBO fi qabsaawoota irratti bobahan laalchisee, waccan irraa rakkoo hin qabu. Akkuma waccanitti akka dhabamtan seenaan biyyuma alaa kana keessatti baranne ni garsiisa. Waan taheef, Maaloo ammas wacca keessan itti fufaa, isin cal jannaan waan isin yaaddan jala deemani saaxiluun rakkisaa dha. Gama kiyaaniis, barruun gantoota, ayyaan laaltootaa, if kanneen QBO irratti diinaaf hojjatan akkasumas qabsaawoota irratti bobahan itti fufa.
Maayyii irratti Obbo odaa Xasee dhiifama gaafachuu barbaada. Akka ofirraa qolattu beeka garuu, akkuma aadeeffatanitti barruu tiyya keessaa loqoda (kan isaan isaatu dhimma itti baha jachuun siin walitti hidhan) wal fakkaatu kan akka Dhaluu tana ykn jala harriiqachuu jedhu barruu kiyya keessaa fudhuuf yaalaniif hedduu gadde. Ittis hin milkooftan kan jedhu daamuu barbaada. Kaniin gaddeef, tokkoffaa Dhaluu/dhihoo jachi jedhu maal akka tahee beekuu dhabuu isaanii qofa osoo hin tahin akka loqoda isaanitti Kaluu tana akkan jedhu warra barbaadaniif gadda. Kaan jala harriiqachuu jacha jedhuus beekuu dhabuun akka ofii dubatanitti sararruu akkan jedhee barreessu barbaaduu isaaniif gadda. Jala harriiquu fi Sararruun garaagarummaa jachoota hikkaa adda addaa qaban otuu hin taane naannoo naannoon dhimma itti bahama. Akkasumatiis jachoonni dhaluu/dhihoo/kaluu dhimma itti bahuuniis akkasuma. Hundaafuu, afaan Oromoo hedduu bal’aa fi kan nu hundi adeemsa keessatti barachaa deemnu waan taheef afaan banuu dura barachuun filatamaa akka tahe carraa kanaan dhaama. Kan biraa kanneen dhaabina oromoon tokko qabu irratti oloola oofuun kan ofii akka waan oromoof filmaata kophaa tahetti dhiheessuu yaaltaniis hedduun isiniif gadda. Kana keessatti ilaalcha diinaa ykn kannee keessa taranii Union Of Ethiopia yaada jedhuu dhaadheessuuf halkanii guyyaa lallabaniis itti hin milkooftan jadhaa. Oromoiaa bilisoomte arguun hawwii oromoota milliyoonootaan shalagamani akka tahe beekuun isinirra jira. Kanneen Kufaa kufisaa jiraniif golee Oromiyaa hundatti Fincila filiinsaa jiran akka yaada keessani fi ilmaan Nafxanyaa irra aanan beekuu qabdu.
Ammas irra deebi’ee Obbo odaa dhiifama, Oromoon kumaataman yaada kee deeggarti, si biraas dhaabbatti. Waan taheef gama keetiin deebisaa akka hin kennineef si gaafadha.
odaa xasee hamma ni gahaa dhiisi dammayyuu utuu mi,ooftuu maragu jedhanii dhaabi sababa barruu keef deebisuuf jecha hiccitiin hedduun gadi bahuu dandahaa dhiisi seenaan fokkataan darbe seenaa bareedaa bor dhufuuf taahu balleessaa dhaabi yoo dhuguma oromoof hadoodda taha asumatti haa dhaabbatuu paltalk irrattis dhaabnee jirraa dhaabaa ni gahaa udaan hudduu ulfaatu gowwaan jabina seha jedhanii nagaatti.
Obbo Lateo paltalk irratti bookisuun akkam tahe? oromoof dubbanna jatanii Oromoo ti bobaahuu yoom dhiiftan. Asii nama bouce gochuu hin dandeesu achumatti bokkisi. Obbo Odaan bobbaa keessaniif nama of duuba deebi’uu miti. Galmee dhugaa akka barreesse himee dhiifamaad obbo odaa gaafatee jira. Isin garuu akkuma baratanittinama yaadaan dadhabdan itti bobahuu hin dhiifne. Galmee Dhugaa dhugaa jirtu barreesse. Waan Dr. Jamal jedhe gurra kiyyaan dhagaye achittu dhukkuu walitti kaafne manni jeeqame. Amma sana dhuuysuuf nama birotti bobbaatan. Mee nama lamaan sadadeen achii iyyu malee namni biro maaliif akka nuti jannu hin janne jattani walgaafattani? anaatu sitti hima isin malee namni rakkoo qabu hin jiru.
Obbo Galmee please itti nuuf fufi. Leteo saaxilamuuf teessu oromorraa adabachuu yoo baattan. Paltalk keessatti iyyitaniif namni isin dhagayu hin jiru.
Galmee Ragaa Reply
Galmee Dhugaa (Ob. Odaa Xasee),
Waan nama dinqu xalayaa dura barreessite caalaa kan amma asirratti ifiif deebistetu eenyumma kee saaxile. Atillee Galmee Dhugaa fi Odaa Xasee nama garagara ta’uu nuuf ibsuu yaalte. Waan kana gooteef ammoo kan barreessite sanatti qaanahuu irraan kan ka’e dha. Ati kijibaan nama madeessite, nami kaan ammoo dhugaa irra hundaahani dhukkee sirraa kaasan; asitti barreeffamaan paltalk keessatti ammoo dubbii dhaan. Waan kijibde sana hundaaf ammas itti gaafatamta. Keessattu waan nama qulqulluu yakkiteef, hamma ragaa gadi baaste yakki ati xibaarte sun dhugaa ta’uu isaa argisiistutti sumatu yakkamaa ta’a.
Akka hogana jaarmyaa tokkootti waan sirraa hin eegamne hojjette. Otuun Hoggana kee ta’e dur taayita keerra si kaasen ture. Naamusa hogana tokko hin guunne. Hogganni akka hawaasni walii galee, Oromoon alaa galu godha malee, akka ati barreefama keenis ta’e paltalk keessatti gootu, nama wal hin nyaachisu. Ati jaaramaya keessa jirtu sanaafuu waan fayyaddu natti hin fakkaatu.
Yoo dhugaa qabaatte as dhokattee deebiftee if faarsuu fi if jajjabeessuu dhiisitti, gara hawaasaatti gadi bahii waan barreesite irratti Jamal Abbaa Garoo waliin mariihadhuu ti dubbii dhugaa akka arginu nu gargaari. “Kan if jajuu hin dogoggoru” jetti Oromoon. Atis xiqqo if jajuu jalqabde. Waan ittiin boontu dhugaa hin qabdu; kanaaf kijibaan if jajjabeessuu filatte. Akka ati, Galmee Dhugaa kun, Odaa Xasee taate ani yoo barbaachise ragaa gadi fiduu nan dandaha. Loqoda kee duwwaan miti, “thanks to the technology, we can follow your foot steps, both in cyber and in reality”!. Kanaaf mee ija jabaadhuu gadi bahi ti waa’e barreessite kana irraa nu mariihachiisi. Hamma kana hin goonetti, “you are no more our leader in QBO”, but “a man of cheap gossip”!
Galmee Ragaa – raga qabaattu fidi. Gama kiyyaan Galmeen Dhugaa Obbo Odaa yoo tahees waan barreefame irraa rakkoo hin qabu. Namni beekaan waan jedhame saniratti kun akkana jedhee dubata. Ati garuu waan barreefame sana irratti wanni jatte tokko hin jiru. Obbo Odaan namoota akka keeti hogganu jachuun salphina. Kan hogganu kumaatamaan qaba. Kanaaf bakkumaa dhokattee turtetti deebi’i dhoqee laaqadhu.
Rakkoon keetii fi kanneen si fakkaatani namuma tokko akka waaqatti jala deemuu dha. Umanni warruma akka keessanitti oloola malee humaa hin finne bira tarkaanfatee jira. Kan nama raaju, dhugaa jirtu dooysuuf tattaafatanillee ummanni ni beeka. Waan barreefame kanas dubbisee hubata. Isin kanumaafu dandeeti hin qabdan.
Sabboonaa waan hin beeyne hin beeynu jedhanii harka hudduu irraa maa na fuuta jedha namichi haadha soddaatiin paltalk baniifi baonc ken eegale odaa xaseetii bar yoo seenaa paltalk hin beeyne onnee gaafadhu kan gaafa bilisoomne arsii qallee gogaa arsii qophee hodhanna kan jedhaa bahe mee utuu na xuxxuquu dhiiftanii gaariidha ani dhuufuu isin guyya guyya guyyaan dhuuftan quban qabaa kanaaf ani harki kiyya qulqulluudhaa garuu fadhiidhoo qabsootii quba qabaadhu fadhidoon hin dubbattu jedhanii waan hedduu biratti hojjatuu kkkkkkkkkkkk nagaatti haqaa guddaan udaan fida.
Obbo Lateo – oloola mataafi miila hin qabne dhiisi. Hadha soddaa isaa? lubbuun jiraatuu hin beeytu akkanumatti xibaarta. “baonc” jachuun maali? bounce jachuu yoo tahe haati soddaa isaa paltalk banachu fi bounce nama gooonaan dansaa dha. Akkan si beekutti garuu paltalk irra walumaan turre farshaantee mic namni sirraa fuudhu dhabame yaadataa. Maqaa namaa balleessuun salphaadha kan waan ati gootuu otuu jiru waan hin taane irratti hin utaaliin. Dura qubee kee sirreefadhu. Yeroo sadi dubbbiseen waan ati xibaartu hubadhe.
Dhaadachuu dhiisi nama qabsotti jiru irraa dhaabbadhu. Namni si beekuus hedduutu jira. Kan waanuma ati qabdu dubatu. Akka keetiti hada soddaa fi waan akkanaa otuu hin tahin. Gurbichuu qullaa of hin dhaabini namarraa dhaabbadhu. Kun paltalk ati itti bookistuu miti. Namoota qubaan lakkawaan kan akka keetiis dubbiin tun nu hin baafnu jedhi itti hima. Amma Obbo Odaa irraa kaatani guyyaa lamaan kana Obbo Ibsaa Guutamaa nama isin kophee miila isaatu hin geenye arrabsa turtan. Inin hin baasuu beeki.
Obbo raasaaf gaaftokko mixiin mataan boyaafatee mataatu na dhukkuba jette kanaafuu maal siif goonu jennaan namayyuu yoo mataan dhukkube mataa koobanii mataa naaf koobaa jette, mixii atuu xiqqoo kanaa eessa si koobnee eessa hafta jedhanii gaafannaan mataa naaf koobaafii mitii mixiin akkas jette haa jedhamuufii jette kanaaf raasaan coqorsa irratti barreesseenuu si gahaa nagaatti.yoo siif galuu dide biddeenaa woliinin si qappi,aa nagaatti.kkkkkkkkk namni agadaa baalaan hin beeyne dubbii haalaan hin beekuu! dura naan dorgomuun dura jijimmitee kana hiiki?
ayii saboona dura barruu sun dubbisii adda baafadhu nagadachuu wollaaltee gabayaa abaarte jedhanii bar. barruu dubbisuu wowwaaltee makmaassa haadha soddaa odaa xaseetti hiiktee si magan haati haadha manaa odaa xasee obbolleettii abbaa kiyyaatii quba qabaadhu.
Yaa Ilmaan Oromoo yeroon ammaa kun yeroo wal irratti duulan osoo hin taanee yeroo gama tokko goraanii diina keenyattii duulanii dha.Kanaaf atii innii seenaa qabsawotaa beektus boriif kaawwadhu.